ऐठन के हो ? कसरी हुन्छ र भए के गर्ने ?
मुख्य पृष्ठHealth Tips रोचक रमाइलोऐठन के हो ? कसरी हुन्छ र भए के गर्ने ?
हामी निन्द्राको समयमा कहिले तर्सेर बिउझिने, निन्द्रामा हामीलाई कसैले पकडेको, सास फेर्न गार्हो भएको, बेला बेला डरलाग्दो अवाज निकाल्ने, सबै कुरा देख्न सुन्न सक्ने तर, हात खुट्टा चलाउन नसक्ने, आज सम्म कहिले नगएको ठाउं पनि देखे जस्तो लाग्ने, जस्तो समस्या देखा परेमा यसलाई एठन लागेको भनिन्छ ।
ऐठन मान्छे मान्छेमा फरक हुने गर्छ । वास्तवमा ऐठन भनेको अस्थाई रुपमा निधाउदा हामीले हाम्रो शरीर चलाउन र बोल्न नसक्नु हो । ऐठन जति सुकै भयानक भए पनि यसले हामीलाई कुनै हानी भने गर्दैन ।
एठन न भुत प्रेतको प्रभाब हो न त मानसिक रोग नै हो । एठन प्रय २ देखि ७ मिनेटको समय सम्म हुन सक्छ वा कसैकसैलाई यो रातभरी पनि हुने गर्छ । कसैलाई जिवनकालमा एक वा दुई चोटी सम्म मात्र हुन्छ भने कसैलाई समय समयको अन्तरालमा भइरहेको हुन्छ । प्राय गहिरो निन्द्रा लग्न आट्दा वा विहान तिर निन्द्रा खुल्ने समयमा ऐठन हुने गर्छ ।
धेरै रात नसुतेर दिनमा मात्रै सुत्ने गर्ने बानी छ र हामीले अचानक निकै समय पछि रातमा सुत्नु गर्दा ऐठन हुने सम्भावना बढेर आउछ । एठन हुदा हामी भुत प्रेत समेत देख्ने हुदा हामी मन मनै भगवानको प्राथना समेत गर्न थाल्छौ । हाम्रो रगतमा अक्सिजन को मात्राको कम हुँदा मस्तिष्कमा अवरोध उत्पन्न् हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मान्सपेसी को नियन्त्रण हराउछ र हामीलाई यसको अनुभुती हुन्छ ।
सुतेको अबस्थामा मानिसले अनौठो अनौठो अनुभुती भएको कारणले मान्छेको मनोवल कमजोर भई उ आत्तिन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा शरिरमा पुग्नुपर्ने अक्सिजन नपुग्ने हुदा हाम्रो शरीर कमजोर हुन जान्छ र हामीलाई ऐठन हुन्छ । यो १०० मा ९८ जनालाई हुने गर्छ । त्यसैले, खासै डराउनु भने पर्दैन । तर, हामीलाई हरेक रात ऐठन हुन्छ भने हामीले एकपल्ट डाक्टर संग सम्पर्क गर्नु पर्छ ।
आइसोलेसनमा बस्दा हुने मानिसक समस्या समाधन गर्ने उपाय
गर्भावस्थामा कोरोना : समय अगाडि बच्चा जन्मने जोखिम